ဆိုးသွမ်းမှုတွေနဲ့နာမည်မကောင်းခဲ့တဲ့ Justin တစ်ယောက် တကယ်ကို ရင့်ကျက်လာနေပြီလားလို့ မေးခွန်းထုတ်စရာကိစ္စတွေအခုတလောတွေ့တွေ့နေရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ Instagram မှာ ဒီလို status တင်ခဲ့တော့ ပိုလို့တောင်မေးခွန်းထုတ်ချင်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ အောက်ကပုံကိုရှုပါနော်။
HEY WORLD THAT GLAMOROUS LIFESTYLE YOU SEE PORTRAYED BY FAMOUS PEOPLE ON INSTAGRAM DON’T BE FOOLED THINKING THEIR LIFE IS BETTER THAN YOURS I CAN PROMISE YOU IT’S NOT!
နာမည်ကြီးတွေရဲ့ Instagram မှာ မင်းတို့မြင်နေရတဲ့ အားကျစရာဘဝကြီးတွေဟာ ဂျင်းတွေပါကွား….. သူတို့ဘဝကမင်းတို့ထက်သာတယ်လို့ လုံးဝမတွေးလိုက်ပါနဲ့… မင်းတို့ထင်သလိုမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ ငါအာမခံပါတယ်…..
ဆိုတော့ကား Justin တစ်ယောက်ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာ အဖြေရှာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့…. မနေ့တနေ့ကပဲ Selena က သူဟာ Justin နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ဘူး ဘာမှမပတ်သက်တော့ဘူးလို့ ပြောခဲ့တာတွေကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဖြတ်လိုက်ဆက်လိုက်နဲ့ ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ သမီးရည်းစားသက်တမ်းဟာ ရှစ်နှစ်ကျော်ကာလတိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Related post >> Selena မဟုတ်တဲ့ သူ့အချစ်ဉီးအကြောင်းပြောပြလာတဲ့ Justin Bieber
Justin မိသားစုကတော့ Selena ကိုချစ်ကြည်ဖြူကြပေမယ့် Selena ဖက်ကသူ့အမေက Justin ကိုခါးခါးသီးသီးဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့် သူတို့ရဲ့ အချစ်ရေးဟာ ဖြောင့်ဖြူးသင့်သလောက် မဖြောင့်ဖြူးခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးအကြိမ် သူတို့ပြန်တွဲခဲ့တာကတော့ မနှစ်ကဖြစ်ပြီး ခုချိန်မှာတော့ သူ့ဖက်က ပြတ်သားနေပါပြီ၊ မိသားစုဝင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘဝကိုရှေ့ဆက်ဖို့ခွန်အားအပြည့်အဝရှိနေပြီလို့ ပြောထားခဲ့တာကိုကြည့်ရရင် သူတို့ဇာတ်လမ်းတကယ်ကိုပြီးသွားတော့မှာလားလို့ထင်နေရပါတယ်။
အဲ့လိုကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးနောက်မှာတော့ မနေ့ကပဲ Justin ကို ဘုရားဝတ်ပြုဖို့သွားနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ ပြီးတော့ ခုတလော သူ့ရဲ့ Instagram မှာ အားကစားလုပ်တဲ့ပုံတွေကိုလဲ မကြာခဏတွေ့နေရတော့ Justin တစ်ယောက် အသည်းကွဲဒဏ်ကို အဲ့တာတွေနဲ့ကုစားနေတာလားလို့ထင်မြင်စရာရှိလာပါတယ်။ (စိတ်ဖိစီးမှုများတာ တစ်ခုခုကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရင် လေ့ကျင့်ခန်းများများလုပ်ကြတယ်ဆိုပဲ) အရင်ကလို ဆိုးသွမ်းရမ်းကားနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့လုပ်လာတာမျိုးတွေကြောင့် Justin တကယ်ကို ရင့်ကျက်လာနေပြီလားလို့ ထင်မိတာပါ။
အသည်းကွဲတာကြောင့်ပဲဖြစ်စေ အသက်ရလာတာကြောင့်ပဲဖြစ်စေ လူဆိုးလေးဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ထက် အခုလို အကောင်းမြင်စရာကိစ္စလေးတွေအတွက် Justin ကိုမကြိုက်ရင်တောင်မှ ချီးကျူးမိပါတယ်။ (အက်မင်က Justin fan တစ်ယောက်မဟုတ်ပါ။) ဆက်ပြီးတော့လဲ လူတွေရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်မလားဆိုတာ အချိန်နဲ့ Justin ကသက်သေပြမှာပါလို့..??
Related Post >> LA မှာ ယာဉ်တိုက်မှုကြုံခဲ့ရတဲ့ Justin Bieber
Related Post >> တက်တူးအသစ်ကို ကြွားလိုက်ပြန်တဲ့ Justin Bieber
PREVIOUS POST Previous post: Rapper လို့ဆိုပေမယ့် သီချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာပါ ဆရာကျတဲ့ Idol များ
NEXT POST Next post: National Producer တစ်ဖြစ်လဲ သရုပ်ဆောင် Lee Seung Gi အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း